Gastronomy an'ny Filipina | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Filipina, gastronomy, Fitsangatsanganana any Azia
Ny Gastronomy of Philippines dia andiana fomba amam-panao kulinarina mifandraika amin'ny mponin'i Filipina, ity sakafo ity dia misy akony lehibe avy amin'ny nahandro Azia atsimo atsinanana sy ny eropeana sasany toy ny nahandro Espaniola. Raha ny fitsipika ankapobeny dia fanao telo isan'andro isan'andro ny filipiana: almusal (sakafo maraina), tanghalian (sakafo atoandro) ary hapunan (sakafo hariva). miampy tsakitsaky antoandro antsoina hoe snack. Na dia afaka mihinana in-6 isan'andro aza izy ireo.
Midika izany fa ny sakafo any Filipina dia mifandraika tsy ny sakafo sy ny dikany ihany, fa ny ampahany aminy koa, ny kolontsainy ary ny fomba amam-panaony rehetra.
1 Fitaomana mialoha Hispanika
2 Ny fahatongavan'ireo Espaniola
3 Fitaomana sinoa
4 Ny fisian'ny kolontsaina hafa
5 Sakafo any Filipina
6 Sakafo an-dalambe
7 Fantatrao ve ny atao hoe Pulutan?
Fitaomana mialoha Hispanika
Ny fitaomana voalohany any Filipina, talohan'ny andro Hispanika, dia tsikaritra amin'ny fanomanana sakafo sasany amin'ny alàlan'ny fandrahoan-tsakafo anaty rano, na kobanina na fanendasana. Ireo fomba ireo dia ampiharina amin'ny sakafo marobe manomboka amin'ny carabao (ombidrano), omby, akoho amam-kisoa, amam-borona, trondro, molotra, sns. Namboly vary tany Azia ny malay tamin'ny taona 3200 talohan'i Kristy. C. Ny làlam-barotra tamin'ny andro talohan'i Hispanika dia natao tamin'i Shina sy India fampidirana ny fampiasana toyo (saosy soja) sy patis (saosy trondro) ao amin'ny sakafon'i Filipina, ary koa ny fomba fanendasana ary ny fanomanana lasopy endrika aziatika.
Ny fahatongavan'ireo Espaniola
Ny fahatongavan'ireo Espaniôla dia nahatonga ny fomba amam-panao kulinarina hovaina, nampiditra sakay, saosy voatabia, katsaka ary ny fomba fanaovana saosy miaraka amin'ny tongolo lay antsoina hoe stew, izay hita ankehitriny miaraka amin'ity teny ity ao amin'ny nahandro filipiana.. Ny fitehirizana sakafo sasany misy vinaingitra sy zava-manitra no ampiasaina ankehitriny ary fomba ampidirin'ny Espaniola amin'ny sakafo ao an-toerana..
Misy ny fampifanarahana amin'ny lovia espaniola amin'ny nahandro filipiana ary malaza be izy ireo, toy ny paella, izay amin'ny kinova filipiana dia karazana vary valencien, chorizo, escabeche ary adobo ao an-toerana.
Nandritra ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny nahandro sinoa dia nanomboka nanisy heriny tamin'ny endrika fivarotana mofo na paty izay nanomboka natsangana manerana ny faritany. Be loatra ka indraindray ny anarana dia afangaro amin'ny fomba toy izany izay misy arroz caldo (vary sy akoho ao anaty ron-kena) ary morisqueta tostada (teny taloha amin'ny sinangag na vary nendasina).
Ny fisian'ny kolontsaina hafa
Hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ny fisehoan'ny kolontsaina hafa dia nitondra fomba hafa ary izany no antony, miharihary izao ny fitaoman'ny sakafo amerikana, frantsay, arabo, italianina ary japoney, ary koa ny fampidirana ireo fizotran-tsakafo vaovao.
Sakafo any Filipina
Araka ny efa noheverinao fa tia mihinana ny Filipiana ka izany no antony ahafahany mihinana in-3 ka hatramin'ny 6 isan'andro, manao sakafo farafahakeliny 3 sy tsakitsaky 2. Ny sakafo feno dia mazàna dia fitambaran'ny vary (voatoto na endasina) ary sakafo farafaharatsiny iray. Ny vary nendasina matetika aroso mandritra ny sakafo maraina.
Ny fomba fahandro fahita mahazatra eto Philippines dia ny adobo (andrahoina amin'ny saosy, tongolo lay ary vinaigitra), sinigang (andrahoina miaraka amin'ny fotaka tamarind), nilaga (andrahoina tongolo), ginataan (masaka amin'ny ronono voanio), ary pinaksiw (masaka amin'ny sakamalao sy vinaingitra), samy mampiasa ny iray amin'ireto sakafo manaraka ireto: kisoa, akoho, hena, trondro ary legioma indraindray.
Ny faritany isan-karazany any Filipina dia samy manana ny mampiavaka azy manokana sy ny sakafony izay ankafizin'ny mponina tsirairay avy ary tiany asehony amin'ireo mpizahatany tonga. Ireo hanina isam-paritra ireo dia matetika no omanina mandritra ny fety (fetibe lehibe ho fanomezam-boninahitra olo-masina) ary ny sasany kosa no loharanom-bola lehibe ho an'ny toerana izay aondrana any amin'ny firenen-kafa.
Raha mankany Filipina ianao dia hahita mpivarotra amoron-dàlana maro mivarotra mais (katsaka mamy), henan-kisoa, akoho amam-boaloboka, chicharrón (hoditra na sofina henan-kisoa, hena akoho na henan-taova), baomba, trondro, hena, atody, voanjo , Balut malaza (embryon-gana gana masaka izay heverina ho matsiro), atody nandrahoina, sandwich vary… ary maro hafa.
Ny sakafo any amin'ny fivarotana amoron-dalana dia mora kokoa noho ny raha mankany amin'ny trano fisakafoanana ianao, fa ny fahadiovana ara-tsakafo dia mety hamela zavatra maro irina, Ka raha mankasitraka ny fahasalamanao ianao dia aleonao mandeha any amin'ny toerana mangina hisakafoanana hanandramana ireo lovia vaovao sy hafa ireo.
Fantatrao ve ny atao hoe Pulutan?
Pulutan no sakafo fihinanana zava-pisotro misy alikaola. Saika ny zavatra rehetra mety ho hitanao eo amin'ny menio fisakafoanana dia azonao vidiana hohanina rehefa misotro toaka. Ny pulutan malaza indrindra dia ny ovy nendasina miaraka amin'ny saosy voatabia, saosisy, baboy tokwa't (soja nendasina ary tofu), kikiam, trondro, hena na baza akoho, akoho nendasina, voankazo voaendy voadidy (peratra trondro) ary sakafo maro hafa.
Raha mandeha any Philippines ianao dia tokony ho fantatrao fa ny gastrolojia dia tsy mitovy amin'ny nahazatra anao tany amin'ny firenenao, fa raha manana saina malalaka ianao dia mety afaka mankafy ary mamerina aza. Ho fanampin'izany, azonao atao ihany koa ny mahita ao anatin'ireo lozisialy momba ny alikaola izay tian'ny mpizahatany, hazan-dranomasina, sakafo tsy mihinan-kena, voankazo sy sakafo maro izay azonao jerena ao amin'ny fivarotana lehibe.
Ny tena zava-dehibe rehefa mandeha any Philippines ianao dia ny fahafantaranao izay tokony hohaninao, tadidio fa ny fahadiovana amin'ny fivarotana amoron-dàlana dia tsy tsara ary mety tratran'ny aretin'ny gastrointestinal ianao. Mendrika kokoa ny mandoa kely kokoa ary mihinana sakafo misy kalitao tsara. Raha mijanona ao amin'ny hotely ianao dia manoro hevitra anao aho alohan'ny handehananao hisakafo hariva na hisakafoanana ao an-tanàna, mangataha toro-hevitra amin'ny mpitantana hotely momba ireo toerana malaza hisakafoanana na hisakafoanana ary afa-po ireo mpizahatany efa nahafa-po teo aloha. Aza mandeha irery raha tsy fantatrao ny toerana satria toy ny amin'ny toerana rehetra, raha te hihinana vola ianao, dia tokony ho fantatrao izay alehanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Filipina » Gastrozy any Filipina